कलेजका विद्यार्थीकालागि टप बिजनेस आईडिया,पढाई पनि कमाई पनि « Arthabazar.com
कलेजका विद्यार्थीकालागि टप बिजनेस आईडिया,
पढाई पनि कमाई पनि
प्रकाशित मिति : १३ असार २०७६, शुक्रबार २०:०५
तपाई विद्यार्थी हो भने यो ख्याल राख्नुस पढाइ संगै बिजनेश गर्ने समय कति छ ? नयाँ र क्रियटिभ बिजनेश सुरु गर्द तपाईको अध्ययनमा असर गर्नु भने भएन । पढाइबाट बचेको थोरै समय निकालेर नयाँ सोचका साथ तपाईले अाफ्नो बिजनेश सुरु गर्न सक्नु हुन्छ । यसले तपाईलाई पकेट मनी समेत हुन्छ भने अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्दा पनि तपाइका लागि तपाईले गरेको सुरुवात नयाँ ठाउमा काम लाग्न सक्छ ।
यो यस्तो काम हो यसको बारेमा तपाइलाई त्यति भनि राख्नै पर्दैन । तपाई साइन्स क्षेत्रको विद्यार्थी हो भने तपाईले फिजिक्स, केमेस्ट्री, म्याथ र बायोलोजी जस्ता ट्यूसन क्लास लिन सक्नु हुन्छ । त्यस्तै नेपालमा अहिले अंग्रेजीको पनि उतिकै संभावना भएको हुँदा यसको पनि क्लास लिन सक्नु हुन्छ । यसमा खास गरि कलेज पढ्ने विद्यार्थीले १० कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई ट्यूसन लिन सक्नु हुन्छ । यसबाट तपाईलाई राम्रो पैसा पनि हुन्छ र सम्बन्धीत बिषयमा पकड समेत तपाईले जमाउन सक्नु हुने छ ।
अहिले जमाना टेकनोलोजीको हो । तपाई यो क्षेत्रमा रुची राख्नु हुन्छ भने यसमा पार्टटाइम र फुलटाइम दुबै हिसाबले काम गर्न सक्नु हुन्छ । अाइटी उद्योग दुनियामा सबै भन्दा बढी गतिमा चल्ने उद्योग हो । यो संगै यसमा जागिरको अवसर पनि धेरै नै हुन्छ । यसका लागि सानो अाइटी सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीसंग जोडिएर काम गर्न सक्नु हुने छ ।
सोशसल मिडिया असिस्टेन्ट
अाजकल सोशल मिडियाको फिल्डमा कही न काही जागिर अाउन थालेको छ । यसमा तपाइले कम्पनीको सोशल मिडिया असिस्टेन्टको कामलाई हेर्ने र त्यसको सहि म्यानेज गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तपाईकेही नयाँ तरिकाले इन्टरनेटमा विभिन्नक्रियटिभ अार्ट बनाएर रमाउन तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटको माध्यमबाट नै हो । इन्टरनेटमा विभिन्न किसिमका अाइडियाहरु हुन्छन । यसको सदुपयोग गर्दै त्यसबाट सिकेर तपाइले अाफ्नै नयाँ बिजनेश अाइडिया बनाउन सक्नु हुन्छ । तपाईले बनाएको अाइडियालाई बुटिकमा बेच्न सक्नु हुन्छ । र यसबाट बजारमा तपाईले नाम र दाम दुबै पाउनु हुन्छ ।
तपाई युटयूबको माध्यमबाट कमाउन चहानुहुन्छ भने सबै भन्दा पहिला तपाई संग युटयूब च्यानल अाफ्नै हुन जरुरी छ । युटयूब बनाउदा तपाईले त्यसमा एउटा थिम चुन्नु पर्छ त्यही थिम अनुसार एउटा प्रोग्राम बनाएर युटयूबमा भिडियो अपलोड गर्नु पर्छ । तर यसमा तपाइलाई पैस त्यो बेला मिल्छ । जब तपाईको युटयूबमा कम्तिमा पनि एकहजार सब्सक्राइबर्स र कमसेकम चार हजार घन्टाको भ्यू हुन्छ । यसका लागि तपाईले यस्तो कन्टेन तयार गर्न जरुरी छ कि सब्सक्राइबर्स र भ्यूज चाडो होस । एजेन्सीको सहयोगमा
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको म्याद सकिदै
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासहित राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यहरुको म्याद अबको तीन महिनामा सकिँदैछ
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई द्वारिकाज ग्रुपको रेष्टुरेण्टमा विशेष छुट
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र द्वारिकाज होटल प्रालि बत्तिसपुतलीबीच एनआईसी एशिया
प्रभु बैँक र गोर्खा सत्याग्रह समितिबीच प्रभु स्पेशल सेभिङ्ग खाता सञ्चालन सम्झौता
काठमाडौँ । ललितपुरको ललिपतुर महानगरपालिका वडा नं. १४ मानभवनस्थित गोर्खा सत्याग्रह समिति नेपाल
महालक्ष्मी विकास बैंकको सानो भर्याङ्मा नयाँ शाखा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्नो सेवा देशभर विस्तार गर्दै लैजाने क्रममा काठमाडौं
तपाईको गाडी नम्बर जोर की विजोर ? भोली चलाए कारबाहीमा…
प्रभु बैँक र गोर्खा सत्याग्रह समितिबीच प्रभु स्पेशल सेभिङ्ग खाता…
Pulsar Dare Venture riders clean Dasharath Rangasala stadium
जुन अदालतमा बुवा कार्यालय सहयोगी थिए, त्यही अदालतमा छोरी न्यायाधीश बनिन्
अर्थतन्त्र, मुख्य समाचार, सहकारी
चन्द्रागिरि साकोसको १८ औं साधारण सभा सम्पन्न, १४ प्रतिशत लाभांश र संरक्षित पूँजी फिर्ताकोष पारित
कर्पोरेट, मुख्य समाचार
सुनको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो
सम्वाददाता : अर्जुन अर्याल
© 2019 Arthabazar.com All Rights reserved by Arthabazar.com